तपाई ग्यास्ट्रिकबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस « Khoj Raftar
तपाई ग्यास्ट्रिकबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस
२१ कार्तिक । प्रायः नेपालीमा ग्यास्ट्रिक हुन्छ । खाना र व्यायाममा ध्यान नदिँदा ग्यास्ट्रिकको सिकार बन्न पुगिन्छ । बजारमा उपलब्ध विभिन्न तयारी खाद्य पदार्थ, रेस्टुरेन्ट आइटमको अत्यधिक प्रयोगले पनि ग्यास्ट्रिक बनाउँछ । शारीरिक श्रम कम गर्ने र अस्वस्थ जीवनशैली ग्यास्ट्रिकको मुख्य कारण हो । यस्ता छन् ग्यास्ट्रिकका लक्षण र त्यसबाट बच्ने उपाय स्
मतदानसँगै कोरोनाविरुद्ध खोप पनि
आज विश्व औलो दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह
आजदेखि बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि
घोराहीमा रोकियो विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम